Salaadda Saint Anthony si loo helo jacayl dhab ah [+ Xoog leh]?
Miisaska isku dhufashada
Baro khadka tooska ah ▷ ➡️
Ducada San Antonio si aad jacayl u hesho
5 Akhriska Min
Ducada San Antonio si aad jacayl u hesho, raadinta jacaylka dhabta ah waa wax kadhigta dad badan mashquul iyo walaac. Tani waa sababta marar badan ay ugu baahan yihiin samaynta a u ducee San Antonio si aad u hesho jacayl, si looga caawiyo inay ogaadaan.
Xaqiijinta qofka waxaa ka mid ah awood u yeelashada qoyskooda iyo tan, inta badan, waxay u baahan yihiin lammaane si ay ugala socdaan hawsha.
Jacaylka dhabta ahi wuxuu noqday mid ganacsi, si xad dhaaf ah oo marar badan waxaan sugeynaa moodal sax ah oo ah waxa ay naga iibiyaan aflaanta, buugaagta iyo bulshada guud ahaan.
Marka hore waa inaan fikirkaas ka tagnaa, jacaylku wuxuu naga yaabin karaa sida ugu yar ee aan u fikirno, marka waa inaan diyaar u ahaano qalbi furanna aan ku helno markii ay go’aansato inay timaado.
Tukada Si loo helo jacayl run ah ayaa inaga caawin doona inaan sugno illaa iyo inta loo baahan yahay oo aan ogaano sida loo garto.
1 Ducada Saint Anthony si aad u hesho jacayl Ma xoog baa?
1.1 Ducada si loo helo jacayl run ah
1.2 U soo ducee Saint Anthony ee Padua si aad u hesho jacayl
1.3 U soo ducee San Antonio si aad u hesho jacaylka noloshaada
2 Miyaan dhihi karaa Sanadka 3da salaadood San Antonio?
Ducada Saint Anthony si aad u hesho jacayl Ma xoog baa?
Way xoog badan tahay oo xoog badan tahay, gaar ahaan haddii aad ku samayso iimaanka iyo qalbiga. Ereyga Rabbiga wuxuu ina barayaa, mid ka mid ah xisaabtadiisa aan la tirin karin ee axdiga cusub, in jacaylku wax walba sameyn karo, wax walba filan karo, adkaysan karo oo uusan waligiis sii jiri doonin.
Sidan ayaan ku ogaan karnaa hubaal inay tahay jacayl ama wax kale oo la dareemayo. Inbadan waxay dhahaan way jecel yihiin waqtiguna wuu joogsadaa sidaa, tan, marka loo eego ereyga Eebbe, ma aha wax fudud.
Qalbigu wax walba wuu khiyaaneeyo. Dareemada ayaa is beddelaysa halka jacaylkuna go'aan yahay.
U duceynta ilaahay abuuraha oo aan waydiisto inuu nagu hanuuniyo si aan u go'aansano cida mudan in aan jeclaano iyo cida aan u qalmin, iyo sidoo kale in la garto cida go'aansatay in ay si dhab ah noo jeclaato waa muhiim madaama aan ka fogaanayno xaalado xanuun leh.
Xusuusnow inaysan jirin salaadda lagu sameeyo iimaan aan laga jawaabina.
Waxay qaadan kartaa waqti ama jawaabta waxay ka imaaneysaa halka aan ugu yara fikireyno, laakiin waa inaan haysanaa kalsooni ah inaan ogaano inuu Eebbe wax walba ku sameeyo wax alla wixii annaga naga wanaagsan oo wuu ogyahay waxa baahiyadeena saxda ah ay yihiin.
Ducada si loo helo jacayl run ah
Ilaahayow, Adiga oo ah abuuraha abuurka, nolosha oo uumay waxa jira oo dhan, Adiga oo wax walba arka, oo wax walba yaqaan, ha joojin inaad toosintaada u aragto noloshayda oo arag sida ay tahay inaan horumar u sameeyo si aan u noqdo qofkaas jacayl run ah.
Haddii dabeecadaydu aysan ahayn tan ugu habboon, haddii habka aan ku noolaado iyo noloshayda aysan ahayn xariir jacayl, ii sheeg. Fadlan qalbigayga ii sheeg waxkasta oo aan ka ogaado eraygaaga. U dhawaada dhegahayga oo tilmaan waxa ay tahay inaan sameeyo. Ha iga tegin, maalinba maalinta ka dambaysa, oo sug jacaylkaas hubaal, adiga oo aan ogayn in aniga ay tahay inaan beddelo.
Ilaaha samadu, Adoo sarreeye oo cajiib ah, adigaan kugu kalsoonahay. Waan ogahay in ereygaaga ku jira qalbigeyga yahay sida biyaha saafiga ah oo webiga dhex socda oo wax walba jidka ku nadiifiya. Waxaan sugayaa eraygaaga iyo taladaada oo dhan. Waxaan rajeynayaa kelmadahaaga. Waxaan rabaa in laygu soo dhoweeyo inta aan qotto dheer. Waan ogahay inay noqon doonaan kuwo caadil ah, caqli badan oo run ah, kuna habboon noloshayda jacaylka.
Maxaa yeelay waxaad tahay cadaalada, xigmad iyo run. Ilaaha samada, waxaan kuu balan qaadayaa inaan ku dhaqmi doono talooyinkaaga khibrada leh iyo inaan marwalba raaco wadada aad igu calaamadeyso. Igu hagi wadadan si aan u ogaado wadada saxda ah ee aan raaco, had iyo jeer sida ku xusan sharciyadaada jacaylka. Waxaan ku ducaysanayaa in lammaanahayga mustaqbalku had iyo jeer i sharfo oo i jeclaado aniga oo aan qaboojin oo iga doorbidaya kuwa kale oo dhan.
Ducadan waa in la sameeyaa iyadoo laga tagayo dookhyadayada, waa inaan ka fikirnaa waxa ka muhiimsan dareenka, waxa sii socon doona sannadaha.
Jacaylku waa lagu gaari karaa meel kasta laakiin jaceylka dhabta ah ayaa maalin walba loo dhisaa. Waa shaqo kooxeed oo aan ku kalsoonaan karno kaalmada abuuraha Eebbe wax walba.
Haddii ay suurtagal tahay in la gaaro jacayl run ah iyo haddaan aamino awooda tukashada suurtagalnimada ayaa aad u badan. U soo duceeya adoo adeegsanaya ereyadayada oo jawaabta sug.
U soo ducee Saint Anthony ee Padua si aad u hesho jacayl
Waxaa mahad leh Saint Anthony, kan ugu roon quduusiinta oo dhan, jacaylkaaga aad u qabto Ilaah iyo sadaqaddaada aad u abuurtay wuxuu kaa dhigay inaad mudan tahay inaad lahaato awoodaha mucjisada.
Erayadaada waxaad ku caawisay kuwa dhibaato ama walwal iyo mucjisooyinba waxay kudhaceen shafeecaada. Waxaan kaa baryayaa inaad ii hesho… (sheeg codsigaaga).
Qurux badan oo qaali ah oo qaali ah, oo qalbigaagu had iyo jeer ka buuxaan naxariis aadanaha, ayaa codkayga ku dhaji Ilmaha Ciise macaan, oo jeclaa inuu ku jiro gacmahaaga, oo weligiisba ku mahadnaqa qalbigayga. (U soo ducee saddex ka mid ah waalidkeen iyo saddex Hail Marys.)
Saint Anthony oo ah Padua waa qofka aaminka ah ee ay tahay inaan u tukanno si aan u helno jacayl run ah. Wuxuu kaa caawin karaa inaad hesho jaceyl, lammaanahaaga, nuska kale, noloshaada dhameystir.
Waa qof kale oo loo abuuray gaar ahaan adiga, ha ka shakiyin inay taasi tahay.
Salaaduhu way xoog badan yihiin waxayna naga caawiyaan inaan si hagaagsan u hagno tamarta si aynaan ugu dhicin niyad jab ama qaladka rumaynta inaan helno jaceyl meel aan jirin.
U soo ducee San Antonio si aad u hesho jacaylka noloshaada
Saint Anthony, oo sharaf leh oo caan ku ah mucjisooyinkaaga, i siiso Naxariistii Eebbe si aan u fuliyo rabitaankeyga ku saabsan (hel lammaane).
Maaddaama aad u naxariis badan tahay dambiilayaasha aniga oo kale ah, ha eegina khaladaadkayga, tixgeli ammaanta Ilaah ee ah inaad cafiyo khaladaadkayga, ii oggolow codsigayga aan kugu adkaysto. Sharafta Saint Anthony ee mucjisooyinka, u ducaynta kuwa dhibaataysan, Waxaan kaa codsanayaa inaad cawradaada ka timaado jilbahaaga oo aad Tilmaantiddayda noqo. Waxaan kuu yimid caawimaad adiga oo codsi ah, taasina waxay iga reebtay qalbigayga dhibaataysan iyo mahadnaqa.
Oggolow sadaqooyinkayga aan kuu ballanqaaday iyo jacaylka aan kuu qabo. Waxaan cusboonaysiinayaa ballan qaadkayga inaan ku jeclaado adiga, Saint Anthony, Ilaah iyo deriskayga.
Igu ducee codsigeyga, oo isii sii nimcada si aan u galo boqortooyada jannada maalin maalmaha ka mid ah, oo aan awoodo inaan ku gabyo naxariista Rabbiga weligiis.
Sn Antonio wuu ku dhageysanayaa wuuna kaa caawin doonaa inta hawsha socoto si aad u hesho jacaylka noloshaada.
Mar alla markii aad isla aragtid, waad sii wadan kartaa inaad weydiisato inuu sii wado tilmaamaha talaabooyinkiisa iyo go’aamadiisa marwalba.
Tukashadu waxay leedahay awood, iimaan iyo aamin ku qabo inuu sameyn doono inta hartay.
Miyaan dhihi karaa Sanadka 3da salaadood San Antonio?
Ma rabtaa inaad tukatid wax ka badan salaadda si aad u hesho jacayl run ah?
Waan qaban karaa.
Kuu duceysan kara oo waa inuu ku tukadaa salaadda oo dhan xad la'aan. Waa la wada duceysan karaa dhammaantood si dhib la’aan ah.
Xusuusnow in waxa ugu muhiimsan ay tahay in aaminaadda badan ee Ilaah iyo tan San Antonio laga helo.
Sidan ayaad uheli doontaa caawinaada ugu badan ee suurogalka ah ee aad ku hesho jacaylkaaga.
Salaad dheeri ah:
Ducada in wax waliba si hagaagsan u socdaan
Duco inaad i soo wacdid
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso
Ducada wananka camal qabow
Salaadda San Alejo
Ducada Saint Helena
Salaadda Xaakinka Xaqa ah
Salaadda in la kala saaro laba qof
Ducada St. Cyprian
Ducada San Marcos de León
Ducada Santa Barbara
U ducee Dhimashada Quduuska ah lacag
Ducada Ilmaha Quduuska ah ee Atocha
U soo ducee inuu qofku xasillo oo dib u xaqiijiyo qofka
U duceeya kuwa dhintay
Tukashada si looga saaro isha xun
Salaadda dhimashada Quduuska ah si ay u xukumaan nin
Tukashada si aad u hesho waxyaabo lumay
Ducada aan kula riyoodo
Ducada San Ramón Nonato
Salaadda si aad lacag u hesho
Ducada Saint Charbel
U ducee hooyo dhimatay
Salaadda inaad iga fikirto
Aayadaha Baybalka ee loo yaqaan '14' ee Baybalka
U soo ducee Santa Muerte si uu qofka la jecel yahay u soo noqdo
Salaadda dhiigga Masiix
Salaadda Saint Ignatius ee Loyola
U soo ducee dhalmo la'aan dhibaatooyin la'aan
U duceeynta dhimashada Quduuska ah jacayl aan macquul aheyn
Salaadda si nin loo soo jiito
Salaadda San Marcos de León oo timaada
U soo ducee Santa Muerte shaqada
Ducada Saint Martin ee Porres
Ducada Aadaanka Quduuska ah
Ducada dhimashada barakeysan si aan uga fikiro
U ducee nafta oo kali ah si qofka looga dhigo
U soo ducee gabadha bikradda ah ee Montserrat dumarka uurka leh
Waxaa laga yaabaa 31, 2020
Salaadda ilaa Catherine-ka Siena
Waxaa laga yaabaa 30, 2020
Waxaa laga yaabaa 29, 2020
Ducada San Roque
Waxaa laga yaabaa 28, 2020
Ducada Saint Lazarus
Ducada gabadha bikrada ah ee Carmen
Waxaa laga yaabaa 24, 2020
3 ducooyin awood leh si shaqada dib loogu helo
Waxaa laga yaabaa 23, 2020
Salaadda in lagu taliyo ninka
Waxaa laga yaabaa 22, 2020
U soo duceeynta St. Jude Thaddeus kiisaska aadka u adag iyo rajo la'aanta
Waxaa laga yaabaa 21, 2020
U ducee gabadha reer Guadalupe
Waxaa laga yaabaa 20, 2020
Salaadda si loo daaweeyo walaaca
Waxaa laga yaabaa 19, 2020
Waxaa laga yaabaa 18, 2020
Waxaa laga yaabaa 17, 2020
Salaadda in la barakeeyo cuntada
Waxaa laga yaabaa 16, 2020
Ducada eey buka | Iimaan ku ducee oo caawi saaxiibkaa bogsashada
Waxaa laga yaabaa 15, 2020
Salaadda bogsashada si aad caafimaad dhakhso leh uga soo kabatid
U duceeyaa in aan dib u soo noqdo
Sida loo ogaado haddii ay tahay jacayl ama saaxiibtinimo
Sida loo iloobo qofka aad jeceshahay
Sida loo sameeyo qof dumar ah oo jacayl ku qaba
Sida loo noqon karo dad badan oo la dhaqanka iyo sida dadka
Sida loo soo kabsado saaxiibtinimada jabay
CUNTADA Si aad u barato CULEYSKA LASO CULIS LUMIS | CAAFIMAAD DAAWASHADA Baybalka CAAFIMAAD Sidee Dios Kala Duwan Ujeeddo Ereyada Halyeeyada Matemáticas Riyadayda Salaada Popular Santos Qeyb la'aan Riyooyin Miisaska Tarot Whatsapp